Andinin-Baiboly 5 Tokony hotadidinao ary nahoana | HEVITRA VAVAKA
Home Andinin-tsoratra ao amin'ny Baiboly Andinin-tsoratra masina 5 tsy maintsy tsiahivinao sy ny antony
Androany isika dia hifampiresaka andininy 10 amin'ny Baiboly izay tokony hataonao tsianjery sy ny antony tokony hahalalanao azy ireo. Amin'ny maha mpino antsika dia ny soratra masina no lehibe indrindra amintsika fitaovam-piadiana. Rehefa mivavaka miaraka amin'ny soratra masina isika dia misy fari-pahefana izay miaro ny vavaka ataontsika. Rehefa mitanisa ny soratra masina isika mandritra ny vavaka dia mitondra fahatsapana fahatakarana fa fantatsika ny zava-misy ankehitriny ary tsy fantatsika fa manana drafitra ho an'ny toe-javatra rehetra Andriamanitra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hasongadinay andinin-teny 10 tsy maintsy tadidin'ny mpino tsirairay ary hazavao koa ny antony maha-zava-dehibe ny fahalalana ireo andinin-teny ireo.
1. Jaona 3:16
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy isalasalana fa io no iray amin'ireo andalana malaza indrindra ao amin'ny soratra masina. Na dia maro aza ny olona no mitanisa ity andalana ity fotsiny ho an'ny fahafinaretana amin'izany dia zava-dehibe ny fahalalana fa ity andalana ity dia mitondra hafatra betsaka kokoa noho ny saintsika tsy misy dikany.
Rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao i Kristy dia nanamafy izy fa amin'ny didy rehetra dia ny fitiavana no lehibe indrindra. Kristy dia tonga tamin'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'ny fitiavana izay ananan'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Taorian'ny fianjeran'ny lehilahy voalohany dia nisy banga iray noforonina teo amin'ny olombelona sy Andriamanitra. Very ny toerany ara-dalàna ny olombelona tamin'ny fandaharam-potoanan'Andriamanitra ary ilaina ny famerenana amin'ny laoniny ny olona.
Ny famerenana amin'ny laoniny dia tsy ho azo natao raha tsy tamin'ny fanavotana. Mandritra izany fotoana izany dia tsy hitranga ny fanavotana raha tsy hoe misy ny manambola zavatra hafa. Tsy maintsy nanafaka an'i Kristy Andriamanitra mba ho faty ho fanavotana ny olona.
Maninona no tsy maintsy fantatrao ilay andalana
Indraindray ny devoly dia milalao ny faharanitan-tsika amin'ny maha mpino antsika. Indraindray dia ataony izay hahatsapantsika ho tsy tiana isika toy ny nanaovantsika heloka izay tsy azon'Andriamanitra famelana. Ny fahalalana an'io andalana io dia hanome antsika antoka fa mbola tia antsika Andriamanitra.
Manome antsika fahatakarana fa na dia mpanota aza isika dia maty i Kristy ary nandoa ny fahotantsika rehetra teo amin'ny hazofijaliana. Ny famonjena antsika dia efa vita rahateo, ny hany angatahina amintsika dia ny hino ilay Zanaka lahitokana. Aza avela hamitaka anao ny devoly amin'ny fiheverana fa tsy ho voavonjy ianao.
2. Romana 8:28
"Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo."
Rehefa ao anatin'ny fahasahiranana eo amin'ny fiainana ianao, rehefa tonga aminao ny tafio-drivotra mahery, dia tokony ho fantatrao fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa an'ireo izay tia an'Andriamanitra. Ny fahafantarana fa manana drafitra tsara kokoa ho anao Andriamanitra dia mamaha olana be dia be ary manome herim-po hiatrehana karazana fanamby.
Ny antony tsy maintsy ahalalanao azy
Rehefa fantatrao fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra, ho an'ireo izay nantsoina araka ny fikasany, dia mitondra endrika fandriam-pahalemana ho an'ny saina mikorontana. Rehefa sahirana be ny sainao, ny fahalalana fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ho amin'ny tsara dia mitondra herim-po isan-karazany hiatrehana ilay olana ary hanampy anao hijoro tsara ao amin'Andriamanitra.
3. Filipiana 4: 13
Vitako ny manao ny zavatra rehetra amin'ny alàlan'i Kristy izay manatanjaka ahy. Rehefa manana nofinofy lehibe ianao dia ho entin'ny olona miteny ianao indraindray. Ataon'izy ireo hahatsapa ianao fa tsy mahavita azy na mahavita na inona na inona amin'ny teny aloaky ny vavany. Io fahakiviana io indraindray dia mety hahatonga anao tsy hahatsiaro tena ho kely ary hanomboka hanome anao ny antony tsy ho vitanao ny hahatratra ireo tanjona ireo.
Ny fahalalana fa tsy misy zavatra tsy takatry ny saina dia lehibe, amin'ny fahafantarana fa mahavita ny zavatra rehetra ianao amin'ny herin'ilay mampatanjaka anao. Izany dia manome anao ny fahatakarana tsy hiankina amin'ny herinao na ny herinao. Rehefa lazain'izy ireo aminao fa tsy azo atao izany, rehefa lazain'izy ireo aminao fa lehibe loatra ka tsy tratranao izany dia mila miteny aminy fotsiny ianao fa tsy ianao, fa Kristy izay miaina ao aminao.
Tsy ho anao ny hahatanteraka izany fa amin'ny herin'i Kristy. Izany dia manome anao karazana fahatokisan-tena manokana.
4. Salamo 46: 1
Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy tokoa amin'ny fahoriana Izy. Taiza no nitadiavanao fanampiana? Milaza ny soratra masina fa Andriamanitra no manampy antsika amin'ny fotoan-tsarotra. Midika izany fa isaky ny manahirana isika dia Andriamanitra no olona tokony hantsointsika vonjy. Ny famonjena antsika dia tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra.
Tadidio fa Kristy dia tao anaty sambo ny mpianatra. Natory tao anaty sambokely i Jesosy ary tampoka teo dia nifofofofo ny rivotra ka saika nivadika ilay sambo. Niantehitra tamin'ny herin'izy ireo sy ny fahalalany ho tantsambo ireo mpianatra mba hamonjy ny raharaha, saingy tsy nisy vokany izany. Mandra-piantsoantso vonjy amin'i Kristy. Rehefa nifoha i Kristy dia noteneniny mafy ny rivotra ary tafaverina soa aman-tsara ny fiadanany. Izany dia manambara bebe kokoa fa avy amin'Andriamanitra ny fanampiantsika.
Maninona no tsy maintsy fantatrao
Ny fahalalana ny toerana mety na olona iantsoana vonjy dia mampihena ny adin-tsaina amin'ny fitadiavana iray. Rehefa tonga ny fahasahiranana, ity andininy ity dia mampita antsika fahalalana fa ny famonjena antsika dia avy amin'ny Tompo, Izy no mpanampy antsika amin'ny andro fahoriana.
Ka raha tokony hitady andriamani-kafa na hitady vahaolana avy amin'ny loharano mifanohitra amin'i Kristy isika dia mandeha mankany amin'ny hazo fijaliana fotsiny.
5. Matio 11:28
Tongava aty amiko rehetra ianao izay miasa saina sy mavesatra ary homeko fitsaharana.
Ity dia soratra masina manome toky fa Andriamanitra irery no afaka manome fitsaharana ho an'ny olombelona. Hoy ny soratra masina: Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome fitsaharana. Ny ampahany amin'ny soratra masina dia milaza ihany koa fa mora ny ziogako ary maivana ny entako.
Tokony ho fantatrao izany mba tsy ho voafitaka ianao hieritreritra karazana fitsaharana hafa misy ivelan'i Kristy Jesosy. Tsy misy afaka manome fitsaharana marina toa an'i Kristy ny sainao. Esoriny eo am-bozonao ny enta-mavesatra ka omeny fitsaharana ianao.
Previous lahatsoratraSalamo 18 Midika andinin-teny araka ny andalana
Next lahatsoratraAndinin-teny 10 tokony hivavahanao rehefa mila fanasitranana ianao
45 mivavaka momba ny zana-tsipiky ny fahafatesana
90 Ady fanoherana an'i Hamana amin'ny laharam-bavaka 2020